Dhisay Case Transfer - Global Transfer Supply Case 877-776-4600
Dhisay Case Transfer2018-11-15T10:41:07-05:00
Calaamadaha lagu guuldarraysto Case Transfer a
Habka ugu kiiska kala iibsiga aad ka shaqeeya waa in ay awood ka gudbinta qaadataa oo u Dardaarmi labada daraf oo gaarigaaga, ama ulahooda wareejiya, iyada oo laba fallaadhihii drive gaar ah. Waxaad u heshaan kartaa on dambe ee gudbinta meel ay ka engine helo awoodeeda. Marka awood u yimaado iyada oo engine si gudbinta, wuxuu maraa kiiska kala iibsiga si ay u hore iyo giraangirihii xaggiisa dambe. Haddii ay dhacdo kala iibsiga aad fashilanto oo aad dhiso karo, ama bedesho kiiska cusub ama dhisay a kala iibsiga. Marka kiiska kala iibsiga aad bilaabmaa in ay ku fashilmaan laga yaabaa in aad dareento arrimaha soo socda:
Maqalka sanqadh in codadka sida marsho ah boodaya soo baxay ayaa tilmaamaya laga yaabaa sifaynta baahida loo qabo in ka badan ama in qayb la xirto. Waxa kale oo macnaheedu noqon karaa in geerka yihiin xirto ama la waxyeeleeyey, ama in aad silsilad hallaabo, in kiiska silsilad kexeeyey kala iibsiga.
Yeelanaya boodaya Out
Haddii geerka aad sii bobbing baxay, waxa ay ka dhigantahay kartaa in geerka la gashado oo aan haysan kartid gaari xamuul ah in laba ama afar drive wheel. Tani waxay sida caadiga ah waa arrin ku yimaada si tartiib tartiib ah, laakiin waxay muujinayaan kartaa dhibaato halis ah.
dusaya sida khaaska ah
waqti ka dib markii shaabadood aad dumin karo iyo bilowdo inay daadato. Haddii aadan wax ka qaban seal wax yaabaha ah waxay keeni kartaa in sifaynta ku filneyn oo dhaawac halis ah gudaha.
shaxdiisa adag waxaa sababi kara xiriirka shaqada in uu yahay laaban yihiin ama xirto a. Mararka qaarkood, xirid ah si fudud u baahan sifaynta. Haddii xirid waa okay, dhibaatada waxaa keeni kara mudacyadii wareejin laaban yihiin ama la waxyeeleeyey gudaha kiiska kala iibsiga.
Bedelka Case gariiraan
mooshin A adag gundhin in dhacdaa inta hi waxaa sababi kara heerarka dheecaanka, qaybood ah kiiska kala iibsiga dabacsan, geerka madhay ama saa'idka, ama cududdii gudaha haleysan. gariiraan A ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu dhaco xowliga yar on baabuurta la xigay viscous haleysan yahay ama pack xajin.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah ama aad u baahan gargaar, na siin call a.
Dooro samaynaysaa aad kiiska kala iibsiga dhisay hoos ku:
Kiisaska Transfer dhisay
Dhisay Kiisaska Transfer Borg Warner
Dhisay Kiisaska Transfer Fabco
Dhisay Kiisaska Transfer Mack
Dhisay Kiisaska Transfer New Venture Gear
Dhisay Kiisaska Transfer Oshkosh
Dhisay Kiisaska Transfer Rockwell
Dhisay Kiisaska Transfer Spicer
Dhisay Kiisaska Transfer ZF
All lagu daydo in stock diyaar u ah inay dunida oo dhan markab maanta.
Mid ka mid ah call annaga iyo waxaan u bixin karaan maraakiibta caalamiga ah iyo adeegga maalin isku mid ah.
Bedelka Case Cilad (qayb ka mid drive waqtiga)
Operation buuq badan * 1. saa'idka madhay, splines, geerka chipped ama fallaadhihii madhay
2. heerarka sifaynta Low
3. Dabacsan ama jabay siisid 1. dib u dhiska unit
2. Buuxi in la saxo heerka
3. Adkay ama bedeli siisid
Bootin out of drive 2-wheel 1. lever Shift detent guga daciif ah ama jaban
2. Saraysa xajin spline dusha mashquuliya xirto ama yaraanayeen 1. guga Bedel
2. Beddelayo qaybaha madhay
Bootin out of marsho in drive 4-wheel 1. Baddalo faragelinta lever la digsiga lagu tumo
2. dhaqdhaqaaqa kiiska kala iibsiga xad dhaafka ah
3. clitch saraysa dusha mashquuliya yaraanayeen ama duugoobay
4. fargeeto wareejin Bent
5. Ushaada Shift detent guga daciif ah ama jaban
6. Baddalo lever guga torsion aan haystan
7. saa'idka madhay, ilkaha marsho ama fallaadhihii 1. Bixi ansixin habboon
2. Hubi / bedeli kiiska siisid kala iibsiga
3.Beddelayo qaybaha madhay
4. fargeeto wareejin Bedel
5. Bedel detent guga
6. Bedel torsion guga
7. unit habeeyn
*note: Xaaladaha kala iibsiga iyadoo la isticmaalayo drive marsho ah soo saari doonaa cabashada marsho ah, tani waa caadi
Bedelka Case Cilad (drive wakhti buuxa)
Operation buuq badan 1. heerka sifaynta Low ama aan habboonayn
2. ka hawlgala “joojinta” waddooyinka dusha qalalan adag.
3. Duugga xad-dhaaf ah on geerka, silsilado ama xun Farqiga
4. Dabacsan ama xumaatay siisid. 1. Buuxi in la saxo heerka
2. Baddalo baxay “joojinta”
3. Dib u dhiska sida loogu baahan yahay
4. Adkay ama bedeli siisid.
Bootin ama waa adag tahay in la baddalo out of kala duwan oo ku yar 1. link Shift si khaldan u Hagaajinay, qaloocsan ama la jejebiyey
2. biraha Shift qalalan ama dhaliyay
3. qaybo unit Dhimista xirto ama la waxyeeleeyey 1. hagaaji, toosi ama bedeli xirid wareeg
2. nadiifi, polish ama saliidayn markii loo baahdo
3. Dayactir ama beddel sida loogu baahan yahay
Joojinta ma geli doonaan 1. qaybo ka joojinta ay waxyeello
2. control vacuum haleysan, Khadadka vacuum dabacsan ama dhaawac
3. xirid wareejin haleysan 1. Dayactir sida loogu baahan yahay
2. Bedel gacanta / ama beddel xirmaan tuubada vacuum
3. Dayactir ama beddel
drive Laba-wheel ma geli doonaan 1. No vacuum / dabacsan ama jabay tuuboyinka
2. motor wareejin haleysan (dhexaad)
3. motor wareejin haleysan (kiiska kala iibsiga) 1. Bedel tuubada oo ammaan oo dhan xidhida
2. motor wareejin Bedel
3. motor wareejin Bedel
drive Afar-wheel ma geli doonaan 1. No vacuum / dabacsan ama jabay tuuboyinka
3. Qabanaya ama jabay kala iibsiga ku xirid wareejin kiiska
4. dhexaad haleysan xirid wareeg
5. kiiska kala iibsiga Waxyeello 1. Bedel tuubada oo ammaan oo dhan xidhida
3. Dayactir ama beddel ku xirid wareeg
4. Dayactir ama beddel ku xirid wareeg
5. Dayactir ama beddel kiiska kala iibsiga
Vehicle qodob markii baabuur-wadidda si toos ah 1. size taayirrada khaldan aadiyo
2. cadaadiska banjarin sinnayn (dhexaad) 1. Isticmaal set isku aadiyo ee Taayirada
2. Dheellitir heerka cadaadiska hawada si heer talinayaa